Maleeshiyaad Al Shabaab ah oo Cirka laga weeraray | Somaale.com
Maleeshiyaad Al Shabaab ah oo Cirka laga weeraray
Faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa diyaarado dagaal oo aan la gareyn halka laga leeyahay oo duqeymo ka gaysatay deegaanka Lambar 60-dan ee gobolka Sh.hoose.
Diyaaradaha oo la sheegay inay kasoo dul kaceen Xeebaha Sooamaliya ayaa lagu soo waramayaa in duqeymo ay la dhaceen ilaa 2-gaari Ruuneed ah oo ay wateen Saraakiil isugu jiray Soomaaliya iyo Ajanabi oo ka tirsanaa Al-qaacidda islamarkaana ka amba baxay deegaanka Lambar 60-dan kuna sii jeeday deegaanka Gandarshe ee gobolka Sh.hoose.
Duqeynta waxa la sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa 6-dagaalyahanno oo mid ka mid ah la sheegay in uu ahaa Saraakiil ka tirsanaa Al Shabaab oo lagu magacaabayay Sheekh Abuukar Xaaji Amad iyo Sarkaal kale oo Kenyan ah kuwaasi oo la tibaaxay inay usii socdeen deegaanka Gandarshe ee gobolka Sh.hoose.
Wararka qaar ayaa sheegaya in duqeynta ay ku dhinteen Sheekh Axmed Takar oo ah hogaamiye ka tirsanaa Al Shabaab iyo saraakiil Ajanabi ah iyo sidoo kale darawalkii gaariga u waday, kuwaasi oo la sheegay in ay saarnaayeen gaariga bamka lagu dhuftay.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab oo ku aadan duqeymahaasi, hase ahaatee waxa cabsi iyo wal wal uu soo wajahay dadka ku nool deegaanka Gandarshe ee gobolkaasi oo arkayay diyaarado dagaal oo joog hoose ku duulaya maadama ay ay ku sugan yihiin Ciidamo ka tirsan Al Shabaab.
Ururka Midowga Yruub iyo Ururo kale ayaa dhawaan shaaciyay inay qorshaynayaan duqeymo xoogan ay la beegsadaan Xarumaha Al-qaacidada Soomaaliya ee Al Shabaab, iyagoo sheegay in xilligaani lagama maarmaan ay tahay la dagaalanka Ururadaasi.
Dowladda Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay ballaarinayso duqeymaha dhinaca hawada ay oo ay diyaaradahoodu ka gaystaan Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay ku badan yihiin Al-qaacidada Soomaaliya ee Al Shabaab.
Wasiir Fowzia “Caalamku waa diyaar ee aan u diyaar garowno”Sawiro